ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက် ဘာတွေတွေးနေလဲ? - Vanguard
Competitor Head 956x620 copy
Home » ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက် ဘာတွေတွေးနေလဲ?
သင့်ပြိုင်ဘက်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ကြိုတင်သိမြင်နိုင်ဖို့၊ သူတို့ ဘယ်လိုဗျူဟာတွေကို အသုံးပြုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချ နေလဲ ဆိုတာကို သိနားလည်ထားဖို့ လိုပါတယ် ။
2008 ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းကြီးက ကျွန်တော်တို့ အပြန် အလှန်မှီခို နေထိုင်နေသော စီးပွားရေးလောကကြီးရဲ့ သိသာထင်ရှားတဲ့ အခက်အခဲကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ အောင်မြင်နေတဲ့ Company တစ်ခုရဲ့ မဟာဗျူဟာတွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ပြိုင်ဘက် company ရဲ့ ဗျူဟာပေါ်မှာလဲ များစွာ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ စီးပွားရေး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အချို့ရဲ့ စစ်တမ်းအရ အလားအလာရှိတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ အပြုအမူနဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေဟာ ဘယ်တော့မှ တစ်သတ်မှတ်တည်း မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ။
ဒါဟာ အနာဂတ်ကို အစီအစဉ်ရေးစွဲသလိုမျိုး ဗျူဟာမြောက် စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အကယ်၍ company အနေနဲ့ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ ဗျူဟာကျတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ် ချက်မျိုး မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ အသုံးတည့်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။
ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီရဲ့ စီမံခန့်ခွဲသူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုအရာမျိုးတွေကို ပိုပြီး အာရုံစိုက်လဲ ၊ သူတို့ရဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင် စွမ်းတွေကို ဘယ်လို လေ့လာ နားလည်ထားသလဲဆိုတာနဲ့ ဒါတွေဟာ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ ဗျူဟာအတွက် ဘယ်လို သက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာကို တစ်ကယ် နားလည် သဘောပေါက်တဲ့ company ဆိုတာ ရှားပါးနေဆဲပါ ။
ဒီလို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ company အနေနဲ့ကတော့ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို လေ့လာသုံးသပ် အတုယူနိုင်ပြီး၊ ဘယ်လို အရာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အနာဂတ်ကိုလဲ ကြိုတင် သိမြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ပြောရရင် ချေးငွေ အကြပ်အတည်းကာလမျိုးမှာ ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှုအားနည်းတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေဟာ စွန့်စားမှု အသစ်တွေကို လက်ရှောင်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Financial နဲ့ nonfinancial assets တွေကို စျေးပြိုင်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိတဲ့ company အနေနဲ့ ကောင်းကောင်းသိပြီး လက်ဦးမှုကို ရယူပါလိမ့် မယ်။
ပြိုင်ဘက်ရဲ့ စိတ်ကူးကို သိမြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာဟာ ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူကြလို့ပါပဲ ။
တူညီတဲ့ အခြေခံစျေးကွက်တစ်ခုတည်းမှာတောင် မတူညီတဲ့ သဘောသဘာဝတွေနဲ့ မတူညီတဲ့ ဗျူဟာ သတ် မှတ်မှုတွေ ရှိနေတာပါ ။ ဒီ့ထက် ပိုပြောရရင် သဘောသဘာဝချင်း တူညီသလောက်ရှိတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေအနေနဲ့ တောင်မှ ပိုင်ရှင်တွေ၊ ရှယ်ရာဝင်တွေနဲ့ စီမံခန့်ခွဲသူတွေရဲ့ မတူညီတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အခါ မတူညီတဲ့ ဗျူဟာတွေကို ချမှတ်ရတာမျိုးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ် ။
ပြိုင်ဘက်ရဲ့ ဗျူဟာမှူးများ တွေးသလို တွေးပါ ။
ပြိုင်ဘက်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ သဘောသဘာဝနဲ့ ဆင်တူနေတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ခေါက်ချိုးညီ ယှဉ်ပြိုင်မှုလို့ ခေါ်ပါတယ်။ Company တွေ အနေနဲ့ မတူညီတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေ၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေနဲ့ စျေးကွက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိနေပြီး၊ တူညီတဲ့ စျေးကွက် အခွင့်အလမ်းနဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို ကွဲပြားခြားနားတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ တုန့်ပြန်တာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ အနာဂတ်ဗျူဟာကို ကြိုတင်ခန့်မှန်း သိမြင်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကတော့ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ သဘောသဘာဝနဲ့ ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းရဲ့ သဘော သဘာဝဟာ ဘယ်လောက် ဆင်တူတယ်ဆိုတာကို နားလည်ထားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဥပမာ ပြောရရင် အသင့်စား စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းရဲ့ ဦးဆောင်သူများဖြစ်ကြတဲ့ McDonald’s နဲ့ Burger King တို့ဟာ တူညီတဲ့ စျေးကွက်ရေစီးကြောင်းပေါ်မှာ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဝလွန်တဲ့ ပြသနာကို တုန့်ပြန်ရာမှာတော့ သိသိသာသာ ကွဲပြားခြားနားတဲဲ့ နည်းလမ်းတွေကို သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ McDonald ကတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပြီး Burger King က တော့ ကယ်လိုရီနဲ့ အဆီများစွာပါ၀င်တဲ့ Sandwiches တွေကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ McDonald ကတော့ အဝလွန်ခြင်းပြသနာကို တုန့်ပြန်ရာမှာ စားသုံးသူတွေနဲ့ အစိုးရကဲ့သို့ သြဇာသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ သူတွေအတွက် မျက်စိကျစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လူလတ်တန်းစားတွေ၊ အဝလွန်ပြီးသားသူတွေအနေနဲ့ကတော့ Burger King ကို ကြိုက်ကြပါတယ် ။
ကျန်းမာရေး ညီညွတ်မှုအားနည်းတဲ့ အသင့်စား စားသောက်ကုန် နယ်ပယ်ကို အဓိက ပစ်မှတ်ထားရမယ်ဆိုတဲ့ အခွင့်အလမ်းကို အသုံးချခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Burger King ဟာ အလိုက်သင့်လေး ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာပါ။
မိမိပြိုင်ဘက်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေ တွေးသလို တွေးပါ။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအနေနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ဖော်ဆောင်ရာမှာ အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ တစ်ကယ့်ကို ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲပါ။ Company တွေ အနေနဲ့ တစ်ခါတစ်လေမှာ သဟဇာတမဖြစ်တဲ့ ဗျူဟာ တွေကို ပြင်ပက ရလာတဲ့ ဘက်မလိုက် အကဲဖြတ်မှုတွေအပေါ် မူတည်ပြီး ဘယ်လမ်းကြောင်းက ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို ရွေးချယ်မှုပြုရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ နောက်လာမယ့် ခြေလှမ်းကို ခန့်မှန်း သိမြင်နိုင်ဖို့အတွက် ပြိုင်ဘက်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူဟာ ဘယ်လို မက်လုံးတွေကို ဦးစားပေးစဉ်းစားနေ သလဲဆိုတာကို မကြာမကြာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။
ပြိုင်ဘက်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို သိနိုင်ဖို့ အရေးပါတဲ့ အချက်ကတော့ ပထမဦးဆုံး ဘယ်လို လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့မဟုတ်) ဘယ်အဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်လေ့ရှိလဲ၊ နောက်ပြီး ထို လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ မက်လုံးတွေက ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ အပေါ်မှာ ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးမှုရှိသလဲ ဆိုတာကို ရှာဖွေရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Company အများစုမှာတော့ ပိုင်ရှင်နဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း စီမံခန့်ခွဲသူတွေဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလေ့့ ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် စျေးနှုန်း သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ ၀န်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် တွေကို အရောင်းဝန်ထမ်းတွေနဲ့ Manager တွေဆီကရတဲ့ အချက်အလက်တွေကို မူတည်ပြီး ချမှတ်လေ့ရှိပါတယ် ။
ပိုင်ရှင်နဲ့ အခြား အရေးပါတဲ့ ရှယ်ယာရှင်များ။
ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ရှယ်ယာရှင်တွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေဟာ ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းရဲ့ ဗျူဟာပေါ်မှာ အဓိကကျတဲ့ လွှမ်းမိုးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုပိုင်လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) အများပိုင် လုပ်ငန်းတွေရဲ့ တန်ဖိုး ၊ နောက်ကြောင်း နဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေဟာ ဗျူဟာပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းဟာ ပုဂ္ဂလိကရှယ်ယာ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ ရေတိုစွမ်းဆောင်ရည် တိုးမြှင့်မှုကို အဓိကအလေးထားပြီး ၀င်ငွေတိုး လာဖို့နဲ့ ၀ယ်သူတွေကို မျက်စိကျအောင် ဆွဲဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အမြဲပုံသေတော့ မှတ်ထားလို့ မရပါဘူး။ ဒီနည်းပရိယာယ်နဲ့ ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းရဲ့ နောက်ကြောင်းကိုလေ့လာပြီး ခန့်မှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ် ။ ဒီလို ပုဂ္ဂလိကရှယ်ယာ ကုမ္ပဏီတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဗျူဟာကို မကြာမကြာ ပြန်သုံးလေ့ရှိလို့ပါပဲ ။
ထိပ်တန်း အဆင့် စီမံခန့်ခွဲမှု
ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ ဗျူဟာကျတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ဖော်ဆောင်ဖို့ ထိပ်တန်းအဆင့် စီမံခန့်ခွဲသူတွေကို ခန့်အပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့ အကျိုးစီးပွားအပေါ် တုန့်ပြန် သက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ အကြီးတန်း အမှုဆောင်အရာရှိတွေဟာ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့သူ အမြဲမဖြစ် နိုင်ပါဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကျိုးစီးပွားနဲ့ မက်လုံးတွေအလိုက် ကွဲပြားသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြသနာမျိုးဟာ အ ကောင်းဆုံး အုပ်ချုပ်မှုပုံစံရှိနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေမှာတောင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိနေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် အကြီးတန်း ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မှာလဲ မကြာမကြာဆိုသလို အာရုံစိုက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။
ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းရဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေ၊ နောက်ပြီး ဌင်းရွေးချယ်မှုတွေကို ဘယ််လိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ ပတ် သတ်ပြီး သင် အကြံဉာဏ်ကောင်းကောင်းရနေပြီဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
သင့်ရဲ့ ကုမ္ပဏီဟာ စျေးကွက်ထဲမှာ အတန်အသင့် နေရာတစ်ခုရှိနေပြီး၊ သင့်မှာလဲ ပြိုင်ဘက် ကုမ္ပဏီရဲ့ အသုံး ၀င်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင်၊ သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုကို မူတည်ပြီး ပြိုင်ဘက်ရဲ့ ဗျူဟာပေါ်မှာ လွှမ်းမိုး မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ သင့်ရဲ့ ကြိုးစားမှုဟာ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို ပုံမဖော် နိုင်ဘူး သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ချက်တွေကို တိတိကျကျ မသိနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ အပြုအမူတွေကို ခန့်မှန်း တွက်ချက်တာမျိုးကို ရှောင်ရှားပြီး၊ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဗျူဟာအရ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အနာဂတ်စီမံကိန်းရေးဆွဲ စမ်းသပ်တာမျိုးဟာ ပိုပြီး သင့်တော်ပါလိမ့်မယ် ။
ယနေ့ခေတ်မှာ ကုမ္ပဏီတွေဟာ သီးသန့်ရပ်တည်လို့မရပါဘူး။ အပြိုင်အဆိုင်များတဲ့ စီးပွားရေး နယ်ပယ်ရဲ့ အနာဂတ်မှာ မတူကွဲပြားတဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုရလဒ်ကောင်းတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို သေချာပေါက် နားလည်ထားရမှာ ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အရင်းအမြစ်တွေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု တွေ၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေစတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေပေါ်မှာ အာရုံစိုက်ထားပြီး ပုံမှန်စျေးကွက် ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့ မသေချာမရေရာမှုတွေကို ကျော်လွန်ရွေ့လျားခဲ့ပါပြီ။ အဲ့ဒီအတွက် ရလာဒ်ကတော့ အရမ်းကြီးပါတယ်၊ အဲ့ဒါကတော့ ပြိုင်ဘက်တွေကို အသာစီး ယူနိုင်ခြင်းနဲ့ စျေး ကွက် အခွင့်အလမ်းတွေကို ပိုမို ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
McKinsey ၏ Getting into your competitor’s head ဆောင်းပါမှ မှီငြမ်း ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။